‘पिपिई’ बाँड्न पनि तामझाम, खोइ सामाजिक दूरी? – Health Post Nepal
‘पिपिई’ बाँड्न पनि तामझाम, खोइ सामाजिक दूरी?
२०७६ चैत २० गते १७:००
७०.५ प्रतिशतले कोरोना जिते
उपत्यकामा ३ र उपत्यका बाहिर १६१ जना कोरोना शंकास्पद बिरामी
कोरोना भाइरस विश्वव्यापी रुपमा महामारीको रुप लिइरहँदा सबैभन्दा अग्रणी मोर्चामा खटिने चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकमीहरू हुन्। कोरोना संक्रमित बिरामी नजिक पुगेर उपचार गर्ने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी नै रहेकोले उनीहरू सुरक्षित पोशाकबाट लैस हुनु जरुरी छ।
नेपालका कतिपय अस्पतालहरुमा पिपिई, एन–९५ मास्क, चश्मालगायतका आवश्यक उपकरण पाउन नसकेपछि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरू बिरामी जाँच्न नचाहेको आरोप लागि रहेको छ।
संघीय सरकारले प्रदेश २ को लागि कोरोना जाँच गर्न एकथान पीसीआर मेसिन, पिपिई, मास्कलगायतका सामग्री मंगलबार पठाएको छ। जनकपुरस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा विहिबार पीसीआर मेसिन जडान गर्ने काम सुरु भएको छ।
संघीय सरकारले प्रदेश २ को लागि एक हजार थान पिपिई पठाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। अस्पतालहरुमा आवश्यक्ताअनुसार शुक्रबार पिपिई पठाइने मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए। यहाँ सम्म कि जनकपुरस्थित प्रादेशिक अस्पतालका चिकित्सकहरुले हालसम्म पिपिई लगायतका सामग्रीहरु पाउन सकेका छैनन्।
तर, प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले भने बिहीबारै तामझामका साथ पर्साको वीरगंजस्थित नारायणी क्षेत्रीय अस्पताल र बारास्थित कलैया अस्पतालमा पीपीआर, मास्कलगायतका सामग्री बाँडेका छन्।
मन्त्री सोनलले नारायणी अस्पतालमा ५० थान पिपिई, दुई सय थान पञ्जा, पर्साकै पोखरिया जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई २० थान पिपिई र दुई सय थान पञ्जा हस्तान्तरण गरेका छन्।
यसैगरी बाराको कलैया अस्पतालमा उनले ३० थान पिपिई, सय थान पञ्जा र ५ सय थान मास्क दिएका छन्। सोनलले बाराकै जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई २० थान पिपिई, सय थान पञ्जा र ६ सय थान मास्क वितरण गरेका छन्।
पिपिई लगायतका सामग्री हस्तान्तरण गर्ने क्रममा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, अस्पताल प्रमुख, प्रहरी प्रमुखलगायतका व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको थियो।
कोरोना संक्रमण विश्वभर महामारीको रुप लिइरहँदा सरकारले ‘लकडाउन’ गरेर सामाजिक दूरी कायम गर्न भनेको छ। तर, प्रदेश सरकारका मन्त्री सोनलले पिपिईलगायतका सामग्रीहरु वितरण गरिरहँदा सामाजिक दूरीको मजाक उडाइएको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि कोरोना संक्रमणबाट जोगिन न्यूनतम तीन फिटको दूरी कायम गर्न भनेको छ। मन्त्री सोनलले कलैया र वीरगंज अस्पतालमा चिकित्सीय सामग्रीहरु हस्तान्तरण गरिरहँदा सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुरा पालन गरिएको छैन्।
पिपिई सामग्री वितरण गरिरहँदा मन्त्री सोनलले स्वयं एन–९५ मास्क प्रयोग गरेका थिए भने त्यहाँ उपस्थित अन्य सबैले सामान्य सर्जिकल मास्क लगाएका थिए।
कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्न सामाजिक दूरी महत्वपूर्ण रहेकोबेला भीडभाड र तामझामका साथ पिपिईलगायतका सामग्री वितरण गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको सर्वसाधारणहरुले बताएका छन्।
अहिलेको संकटको समयमा जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिहरुले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर उदाहरण बन्नुपर्ने जनकपुर घर रहेका प्रदीप झाले बताए।